ugu dambeeyay News Turkiga | RayHaber | raillynews
HomeWarqad Hordhac ahnews dambeeyay Turkiga
10 / 05 / 2020 Warqad Hordhac ah
Dhacdooyin kasta oo run ah ama xiise leh ayaa lagu dhawaaqayaa iyada oo loo eegayo runta newswaxaa lagu sameeyaa qiimeyno eex la'aan ah. Luqadda loo adeegsaday gabi ahaanba waa wax iska cad oo loo diyaariyey qaab dadku fahmi karaan.
Wararka marka internetku aanu wali nolosheena ku jirin; Waxaa xigay wargeysyada iyo idaacadaha. Horumarinta tikniyoolajiyada, internetka haberxnumx Goobaha wararka tayada leh iyo kuwa xirfadda leh sida warbixinnada wararka waxayna daabacaan dhacdooyin badan oo xiisa badan iyo kuwa hadda ka jira adduunka iyo waddankeenna.
In si dhakhso leh looga warqabo dhammaan noocyada mowduucyada daqiiqada ugu dambeysa, ajandaha, adduunka, dhaqaalaha, isboortiga, joornaalada iyo tikniyoolajiyadda caafimaadka. https://www.haber365.com.tr/ Waad raaci kartaa isku xirka.
Turkey coronavirus Tracking Waxaad
Coronavirus-ku waa mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee saameeya ma ahan waddankeena oo keliya laakiin adduunka oo dhan. Haber365, oo soo baadhay fayraskan, kaas oo wax u dhimaya adduunka iyo dalkeenna, bilowgii oo aan ka saarin ajandediisa, ayaa soo tebiyay wararka ku saabsan horumarka cudurka coronavirus ee waddankeenna iyo adduunka. Goobta wararka, oo ay kujirto wararkii ugu dambeeyay ee talaabooyinka laga qaadayo cudurka coronavirus ee wadankeena, tirada bukaanka, waxay sidoo kale ku daabacdaa warar wargelin ah boggeeda internetka, iyadoo lagu daro shaqooyinka dadaalka badan ee dhakhaatiirtayada.
Warka la socda tirada dhimashada ee coronavirus adduunka oo dhan, waxay sidoo kale ku dhawaaqaysaa waxa ay waddamadu ka samaynayaan ka hortagga fayraska warkooda. Akhbaarta waxaad ka heli doontaa wadankee heysta miisaanka miisaanka culus ee ku saleysan wadamada, sheekooyinka dadka coronavirus ku leh dunida siyaasada iyo isboortiga ayaa sidoo kale lagu soo daray. Waxaa ka mid ah wararka sheegaya inuu si dhow ula socdo ajandaha adduunka ee ku saabsan coronavirus; Waxay kaloo dadka ku nool waddankeenna uga warraysaa wararka ku saabsan waxa ay waddamada kale u qabtaan cudurka coronavirus, sida ay uga taxadaraan, sida ay dadku ugu nool yihiin waddankooda.
In goobta news aad fursad u leeyihiin inay ku deeqaan si coronavirus ah, sida gargaarka dalalka dunida Turkey, kaas oo sidoo kale ka qeyb qaataan wararka Haber365, ajandaha la news Ujeedada iyo macquul ah, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo news tifaftirka in habka ugu Ujeedada siinayaa meel to content news aad raacdo doontaa.
Dhinaca Agenda Radar-ka Dalka
Marka laga reebo wararka coronavirus, ajandaha dalka wuxuu ka kooban yahay warar siyaasadeed iyo mid dhaqaale, iyo wararka isboorti. Goobta wararka, oo sidoo kale la socota horumarka ka socda dalkeenna xagga caafimaadka iyo tikniyoolajiyad ahaan xirfad ahaan, gaar ahaan daqiiqada ugu dambeysa. news waxay u sheegtaa kuwa raacsan dhacdooyinka. Goobta wararka, oo ku soo bandhigeysa wararka heerka ugu sarreeya oo leh fiidiyowgeeda iyo sawirkeeda sawir, waxay bixisaa wararkii ugu dambeeyay iyo wararka xiisaha leh iyada oo si daacad ah ula socota.
In kasta oo coronavirus uu ku yaal ajendaha ugu sarreeya dalka, haddana warar badan ayaa ajandeena ka ilaaliya siyaasadda. Goobta wararka, halkaas oo tartannada u dhexeeya dhinacyada loo raaco maalinba maalinta ka dambeysa, waxaa sidoo kale ku jira warar sheegaya in laga yaabo inay bandoow timaado inta lagu jiro Ciidul Fitriga.
Isla mar ahaantaana, wararka ku saabsan goorta la furo timo-dhaqeyaasha iyo xardhoyaasha kuwaasoo ay tahay inay xirto goobahooda shaqo ee ay ugu wacan tahay coronavirus-ka ayaa lasocota gaar ahaan milkiilayaasha goobta shaqada.
Goobta wararka waxaa sidoo kale ku jira warar isboorti oo ka socda adduunka iyo dalkeenna. Goobta wararka, oo muujineysa shaqo aad u wanaagsan waxa ay kooxaha adduunka iyo kooxaha dalkeenu qabtaan, waxa wareejintu ku socoto howshan, waxa ay maareeyayaasha, garsoorayaasha, macallimiinta iyo ciyaartooydu sameeyaan, waa wargelin ku saabsan sida loogu isticmaalo bisha Ramadaan xagga caafimaadka. Waxay soo jiidataa dareenkeeda leh wararkeeda.
Dadka jecel tikniyoolajiyadda ayaa si fudud ula socon kara horumarka adduunka iyo dalkeenna ka gelaya barta wararka. Dadka muujiya xiisaha badan ee ciyaaraha internetka ee maalmahan guriga ku jira waxay awoodaan inay helaan wararka ku saabsan ciyaarta Call of Duty, kaas oo saameeya adduunka oo dhan, halka muujinaya inay si dhow ula socdaan horumarkii ugu dambeeyay ee taleefannada casriga ah kuwaas oo qayb ka noqday nolosha wararka teknoolojiyadda.
Haber365, oo ay ka muuqato warkiisa haysta garaaca wadnaha adduunka iyo dalka, ayaa siiyay degelkeeda wararka; waxay sii wadataa adeegyadeeda wararka wararka xirfadeed iyo tayo sare leh ee wararka xaaladaha wadooyinka, xaaladaha cimilada iyo heerka sarrifka.
kaabayaasha logistics Turkey waa ku filnayn
Trabzon Uzungöl Turkey noqon doonaa cable baabuur ugu dheer
Erdogan wuxuu baaray Isbitaalka Hoos kadhac garoonka diyaaradaha ee Ataturk
Yaan lagu dhex dhicin cudurka faafa!
Mountains dhaqaalaha Turkey ayaa lagu helay doonaa
bartilmaameedyada 2023 in gaadiidka Turkiga